Isixeko saseAlmería sigcwele iivesi | Uncwadi lwangoku
Isixeko saseAlmería sigcwele ziivesi
Ukuba uvela kwisixeko esihle saseAndalusi saseAlmería, unethamsanqa. Izitalato zayo zizaliswe ziivesi kwaye abavusi baseAlmeria bavuka kusasa namhlanje nabo ... Ababhali bavela Indawo yeNkcubeko, iMfundo kunye neNkcubeko yeBhunga lesiXeko iAlmería, eliququzelelwa nguRosa Díaz kwiwebhu Luvo olunjani nalapho iwebhusayithi ye Makiniko, ezinikele ekufotweni nasekuyileni.
Mhlawumbi i incwadi Fair Isixeko siqale namhlanje ngoLwesithathu we-26 kwaye sihlala kude kube ngoMeyi 1 sinento yokwenza nayo. Nangona, njengoko sele sazi, izixeko ze IMadrid kunye neBarcelona sele izaliswe yimibongo, ngakumbi imixholo yothando, ephefumlelwe bubugcisa basezidolophini I-Boamistura.
Njengoko sifundile, amabinzana aphefumlelwe ngababhali abakhulu bamanye amazwe abaswelekileyo njengaye UMiguel Hernandez, zazo kulo nyaka Isikhumbuzo seminyaka engama-75 yokusweleka kwakhe y UJulio Cortazar, umbhali owaziwayo "IHopscotch". Ababhali kunye nabanye abalinganiswa abavela kwinkcubeko yenkcubeko yeAlmeria nabo baye bakhuthaza, njengoAna Santos, umhleli we «Ii-El Gaviero Editions» kunye nombhali nentatheli uCarmen de Burgos, phakathi kwabanye.
Singazifunda phi ezi zivakalisi?
Nokuba uvela eAlmería okanye ukuba undwendwela esixekweni ngokulandelayo, uya konwaba xa usazi ukuba ungazifumana ezi binzana kwezi ndawo zilandelayo zesixeko:
KwiPaseo de Almería:
"Iivesi zika-Ana" (Loluphi uluvo).
"Almería, ndikuhlwayele kwiivesi" (Loluphi uluvo).
«UTshazimpuzi, ezele ziiroses kwintlanganiso yethu» (UFrancisco Villaespesa).
«Kuphela uvuka ekukhanyeni» (UJoseph Angel Valente).
«Ndingowenyama kunye nevesi» (Loluphi uluvo).
"Ubomi bundenze imbongi" (UMiguel Hernández).
KwiRambla Obispo Orberá:
"Isixeko selanga" (UMiguel Naveros).
"Bona nabo okanye bona bona nabo" (UCarmen de Burgos. Colombine).
"Iziqithi zothando lwam" (UCelia Viñas).
KwiCalle Reyes Católicos:
«Into endiyithandayo ngolwimi lwakho ligama» (UJulio Cortazar).
Ndinyanisile, ndihlala nale yokugqibela. Uthetha kakhulu ngento encinci ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Isixeko saseAlmería sigcwele ziivesi
Thatha inxaxheba kwi-XXIV uJosé Nogales Short Award Award
Njengezinja neekati. Iincwadi ezi-4 malunga nabahlobo abasenyongweni aba-4.